News - Nke ahụ bụ karama ochie nke ndụ ọhụrụ, Coca-Cola RPET nche anwụ nke anyanwụ “biri” Qingdao North Railway Station
Nke ahụ bụ karama ochie nke ndụ ọhụrụ, Coca-Cola RPET nche anwụ anyanwụ “biri” Qingdao North Railway Station
Nke ahụ bụ karama ochie nke ndụ ọhụrụ, Coca-Cola RPET nche anwụ anyanwụ "biri" Qingdao North Railway Station
Na Ọgọstụ, 2020, na isi ụzọ ụkwụ na-agafe agafe nke Qingdao North Railway Station, e debere ọtụtụ nche anwụ pụrụ iche, bụ nke e bipụtara ihe ndị nwere njirimara Qingdao dị ka ịgba, mmiri seagull na ije. Ihe kacha dị ịtụnanya bụ okwu ahụ bụ “M na-abụbu karama plastik” na “Anyị na-eche” na-ebipụta na nsọtụ nche anwụ, nke dọtara mmasị ndị na-aga ụkwụ na ụkwụ.
Kedu ihe nche anwụ na-eme na karama plastik? Ọ na-apụta na nche anwụ ndị a niile bụ nke ejiri karama rọba. Mgbe emezigharị, a na-edozi karama plastik efu site na usoro nke usoro ma mesịa kpaa n'ime ụdị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ya bụ RPET fabric material, nke bụ echiche ọhụrụ n'ọhịa nke imegharị ihe onwunwe. Nwere ike iji ihe ruru 17 karama rọba karama mee ka anwụ nche anwụ na n'ezie egweri ya.
Aghọtara na nche anwụ ndị a sitere na echiche nke mmepe na-aga n'ihu nke Coca Cola - "Ọ dịghị ihe mkpofu n'ụwa", ezubere iji kọọ usoro ndụ zuru oke nke PET, ka ọtụtụ mmadụ nwee ike ịghọta njirimara akụ PET na uru nke imegharị ihe maka iji.
Kemgbe ọtụtụ afọ, CofCO Coca-Cola (Shandong) Co., Ltd. etinyela aka na inye aka ịmepụta ịma mma nke obodo ahụ, mmepeanya na nchedo gburugburu ebe obibi, na-elekwasị anya na ihe ọhụrụ na ọdịmma ọha na eze, iji jikọọ aka wuo mmepe obodo mepere emepe nke Qingdao .
Ejiri akwa nke ejiri eriri emegharị site na iji "Coke bottle" nwere ike ịghagharị n'ime eriri PET na 100% ihe eji emegharị emegharị, nke nwere ike belata mkpofu. Ka ọ dị ugbu a, oriri nke karama mmanya PET na China dị oke elu. Ighaghachi nke karama mmanya PET a tụfuru nwere ike ọ bụghị naanị belata mmetọ gburugburu ebe obibi, kamakwa na-eme ka ihe mkpofu ghọọ akụ.
Maka PVC nwere chlorine (bụ isi ihe dioxin na dioxin bụ carcinogens) ma nwee mmetọ gburugburu ebe obibi nke ọla dị arọ, plasticizer, wdg, na-eji teknụzụ kachasị ọhụrụ, mmepụta Taiwan enweghị PVC, ọdịnaya ọla dị arọ ma ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara tụrụ, raara nye dochie PVC ngwaahịa, na-a ọgbọ ọhụrụ nke gburugburu ebe obibi-echebe ihe onwunwe soplaya.